हत्यारा खोई ? « Loktantrapost
हत्यारा खोई ?
१४ श्रावण २०७३, शुक्रबार २३:१०
वालवालिका भविश्यका कर्णधार हुन् भन्ने नेपाली समाजमा उक्ति नै छ । तर सबै वालवालिकाले आफ्नो भविश्यलाई सुरक्षित गर्न पाएका छन् त ? भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै यही समाजमा तेर्सिएको छ । प्रसङ्ग गत हप्ता मात्रै झापा बुधबारेमा भएको वालिका हत्याको हो । के दोष थियो ११ बर्षीया वालिका तनुजा कोइरालाको, अनि किन मारिनु प¥यो वाल्य अवस्थामा नै । यो प्रश्नले यति बेला दैनिक मलाई घोचिरहेको छ ।
यो घटनाले मेरो मानसपटलमा आएको ज्वारभाटाको कयौँ पटक मैले सामना गर्नु प¥यो । कहिले बाबु भएर सामना गरेँ, कहिले सञ्चारकर्मी भएर समाना गरेँ भने कहिँले काहिँ एउटा उग्र बिद्रोही भएर पनि मेरो मस्तिष्कले यो घटनाको सामना गर्नु प¥यो । बिद्रोही यस अर्थमा कि एउटा अबोध वालिकाको हत्यामा संलग्न दोषीलाई खोजी गरी आँफै सजायको घोषणा गर्न पाए त्यसको पनि बाँच्ने अधिकार अन्त्य गरदिन्थे भन्ने लाग्यो । नरपिचासधारी त्यो हिंस्रक हत्यारा अहिले पनि यही समाजमा कतै घुमिरहेको होला । अनि हामी भने चुपचाप बसिरहेका छौँ । प्रहरीले एक सातासम्म पनि हत्यारा पक्राउ गर्दैन । अनि हामी चुपचाप बसिरहेका छौँ । राज्य त्यस घटनाको सत्य तथ्य के हो ? समाजका सामु भन्दैन तर पनि हामी चुपचाप बसिरहेका छौँ ।
हत्यारा नै पहिचान नगरी प्रशासन निर्लज्ज मुद्रामा खित्का छोडिरहँदा पनि हामी भने चुपचाप छौँ । सँधै चुपचाप, जसले जे गरे पनि चुपचाप किन ? तनुजाको बिद्यालयका लागि मात्रै चाहिएको हो हत्यारा कि उनका आफन्तलाई मात्रै चाहिएको हत्यारा । ११ बर्षको उमेर जसलाई ठिक र बेठिक त के लिङ्गभेदसम्म थाहा हुन्न । यस्तो अवस्थाकी ती वालिकाको हत्यारा पक्राउ गर्न यो समाज किन दबाव सृजना गर्न सकिरहेको छैन । एउटा प्रक्रियाबाट परिवर्तन हुने सरकारको समर्थनमा सडकमा उर्लने ती युवा समूह कता हराए ? अनि डा.गोबिन्द केसीको जीवन रक्षा गर्न चर्का कुरा गर्ने त्यो दस्ता कता हरायो ? डा.केसी त जिउँदै थिए तर यहाँ त एउटी वालिकाको हत्या नै भइसक्यो ।
अब पनि हामी दबाबमूलक रुपमा सडकमा नउत्रने हो भने ति वालिकाको हत्याराले उन्मुक्ति पाउने छ र उसले आफुलाई थप बलियो भएको महशुस गर्नेछ । त्यसको शिकार अर्की बच्ची हुनु पर्ने छ र त्यो तपाईको घर तथा आफन्तकोमा समेत बज्रपातका रुपमा आई पर्न सक्छ । हामीलाई बिरोध र समर्थन गर्न अब राजनीतिक बिषय मात्र चाहिने भएकै हो त ? कि दबाब दिन कुनै नेताको आदेश नै चाहिने अवस्थामा हामी पुगिसक्यौं ? यतातिर फर्केर हेर्न जरुरी छ ।
जिउँदै हुनु भनेको हिँडडुल गरिरहनु र सास फेर्नु मात्र होइन । त्यो त पशुले पनि गरेकै हुन्छ । जिउँदै हुनुको पनि अर्थ छ । विवेक र ज्ञानसहित न्यायका लागि लड्नुले ब्यक्ति जिउँदै भएको प्रमाणित गर्छ । त्यसैले यदि अझै हामी जिउँदै छौँ भने तनुजा कोइरालाको हत्यारालाई पक्राउ गरी कानुन बमोजिम कारवाहीको कठघरामा उभ्याउन राज्यलाई दबाब दिन जरुरी छ । नत्र यस्ता हत्याका थुप्रै आरोपी अहिले पनि फरार छन् । अब यो हत्यारा पनि फरारको सूचीमा दर्ज हुनेछ र उसलाई फेरि अर्को हत्या गर्न बलशाली बनाउने छ ।
नारी सञ्चारगृहको अक्षयकोषमा २२ लाख, लक्ष्यको नजिक
विर्तामोड, ३० भदौ । झापाली महिला पत्रकारहरुको छाता सङ्गठन नारी सञ्चारगृहले स्थापना गरेको नारी सञ्चार प्रोत्साहन अक्षयकोषमा २२